नेतालाई पाउजु र अभिनेतालाई खुत्रुकी – NEPÆNGLISH
हामीले विगतमा सुन्दै र पढ्दै आएको कुरा हो कि पूर्वी नेपालमा धेरै जनाले गलत ढंगले नेपाली नागरिकता हात पार्‍यो भन्ने कुरा । अझ ठाडो भषामा भन्ने हो भने, हाम्रा छिमेकी भैय्याजीहरूको हालि-मुहाली नै बढेको थियो किर्ते नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउने कुरामा । तराईबासी नेपालीलाई नै अल्पमतमा पुर्‍याउन सक्ने त्येत्रो खेल भारतले खेल्दा हाम्रा देशका नेता भनाउँदाहरूले चुइँक्क सम्म पनि बोलेन । मधेसको सच्चा नेता वा धर्ती पुत्र भनि आफूलाई दावी गर्ने मधेस दलका नेताहरू त झन् चितुवाको अगाडि परेको कुकुरजस्तो भयो । हामी जस्ता राजनीतिको आधारभूत ज्ञान पनि कधकल्चो भएकाहरूले बुझेका कुरा हुन् कि, भारतले आफ्नो स्वार्थमा नेपाल सरकारलाई किन नागरिक विधेयक संसदबाट पास गराउन खोज्यो भन्ने कुरा । उसले नेपालको अहिलेको जस्तो राजनैतिक तरलताको भरपूर फाईदा उठाउँदै सिमामा रहेका आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई किर्ते कागजातहरू मार्फत नेपाली नागरिक बनाउने काममा लागेको थियो । केहि हदसम्म उनिहरु सफल पनि नभएका होइनन् । हाम्रा निजामती जागिरे राष्ट्रसेवक कर्मचारी र उनिहरूका बडाहाकिमले गएको साल स्वीकार पनि गरेकै हो, कि नागरिकता वितरणमा केहि गम्भिर त्रुटी भएकै हो । केहि हजार रुपैयामा नै नेपाली नागरिकता बजारमा बिदेशीहरूले किने । दक्षिणी छिमेकीले बाँसुरी बजाए, त्यसकै तालमा हाम्रा देशका कुपुत र भ्रष्टाचारी नेताहरू छमचामी नाचे । छिमेकीले एकनासले ढोलक बजाइरहे, यता नेताहरू छिमेकीले हातमा थमाइदिएको पाउजु कस्दै तालमा नाच्दैरहे । उनिहरुको हिजडापन यसरी प्रकट भयो तर उनिहरुले यसमा पनि ख्वामितको सेवा नै पुरुशार्थी हो भन्ने भ्रम पालीराखे ।
आज देशमा के भयो भनेर सोध्नुभन्दा पनि के मात्र भएन भनेर सोध्नुपर्ने बेला आएको छ । नक्कली नागरिकता बोकेका अपराधीहरू यहाँ लूटपाट मच्चाइ आफ्नो देशमा सुरक्षितरूपमा जीवन बिताइरहेकाछन् । हाम्रा नेताहरू मन्त्री हुने बित्तिकै आफ्ना सबै आफन्त भनसुन र ठाडो आदेशको भरमा सरकारी कार्यालयमा भर्ती गर्ने प्रव्रितीलाई नै अङ्गालेर दुतावासले आफ्नो कुतनैतिक मर्यादालाई नाघेर परराष्ट्र मन्त्राणीलाई गोप्य चिट्ठी लेखेर मेसिनले पढ्ने राहदानी पनि उनिहरुले नै छाप्ने रे । जब यसको पनि पोल खुल्यो, महामहिम नाङेझार भए, तर शरम भए पो ! किरा नै स्याउँ-स्याउँ परेका रियल नामक जुस गरीब नेपालीलाई पिलाइराखे । दुतावासबाट बिशाक्त जुसको बचावमा एकैचोटी महामहिम गर्जे, मानौं उनी भर्खर तोपको छर्राले घायल भएको सिंह थियो । लाछी सरकारले आफ्नो ख्वामितको अगाडि के बोल्न सक्थ्यो र ! यता महामहीमको गर्जन पर-पर सम्म थर्थराउँदै थियो, यता पसलहरूमा नयाँ-नयाँ जुसको पोकाहरूबाट किरा र लेदो चिप्लेटी खेल्दै थालिमा झर्दै थियो । दिनका दिन मानिसहरू त्यो जुसले विरामी भई अस्पताल भर्ना हुँदै थियो भने यता टि.भी का विज्ञापनमा राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धर नामक दुई जन्तु “म त सधैं रियल जुस नै पिउँछु” भन्दै त्यहि जुसको प्रबर्धनमा लागिरहे । विरामीको नशामा सलाइन पानी चढ्दै गर्दा उनिहरु भने घाउमा नून छर्कँदै ढोङगी हाउ-भाउमा जुसको तारिफ गर्दै पिउन उक्साउँदै गरेको द्रिश्य टि.भी का पर्दामा आउँदा विचरा बिरामी र उसका परिवारलाई कस्तो लाग्दो हो ? कहिले यिनिहरूले सोचे ?
कलाकार भनेका देशका गहणा हुन् उनिहरु आँफै भनि टोपल्छन् । अनि देशको खोइ कति, चौथो पो हो क्यारे, अङ्ग हो पनि भन्छन् । त्यसो हो भने, के राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धरको देश, समाज र आम जनताप्रति कुनै जिम्मेवारी छैनन् ? के पैसोको मुठो नै पायो भन्दैमा जे-जसको पनि राम्रो भन्दै हिंड्ने? पैसाको लागि खराबलाई पनि असल भन्दै सामाजिक रुपमै बखान गर्दै हिंड्ने हो भने, अझ यो भन्दा बढी कमाउने अवसर पनि यहाँहरूलाई नै नआउला भनेर नकार्न सकिंदैन । यदि बजारमा रियल जुसको बारेमा केहि पनि सुनेकै थिएन भने पनि एउटा कलाकार समाजप्रति पनि जिम्मेवार रहने भएकोले उसले कुनै कुराको विज्ञापन गर्दा के त्यसको बारेमा बुझ्न जरुरी छैन ? तपाईं-हामीले भन्ने कुरा र एउटा कलाकार/सेलिब्रेटीले भन्ने कुराको प्रभाव आम मानिसमा आकास-जमिनको फरक पर्छ । भर्खर केहि दिन अघि मात्र यही किरा परेको जुस पिएर एउटै घरका पाँच जना विरामी परेर अस्पताल भर्ना भएको कुरा छापामा आएको थियो । के यसको नैतीक जिम्मेवारी ती दुबै कलाकारले लिनु पर्दैन ?
आज लाटो देशमा गाँडो तन्नेरीहरूले राज गर्ने देशमा, खै हामीले कसलाई के भन्ने ? बरू हामी अब आफन्त र साथिभाइबाटै आफ्ना वरपरका मानिसहरूलाई यस्ता कुराहरूबाट सजग गराउन र सुसुचित गराउनतिर लागे भने मात्र हो । नत्र त यस्ता नेता, अभिनेताहरूबाट राम्रो आशा राख्नु पनि अब बेक्कार छ ।
Previous Previous post: शुभकामना